Hiob 36 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
36 Elihu toaa so bio sɛ: 2 “Nya abotare kakra ma me, na mɛma woahu sɛMewɔ nsɛm foforo ka ma Onyankopɔn. 3 Mede me nimdeɛ befi akyirikyiri,Bemdi na mede bɛma me Bɔfo.+ 4 Ampa ara, nkontompo biara nni me nsɛm mu;Nea owie pɛyɛ wɔ nimdeɛ mu+ no wɔ w’anim. 5 Hwɛ! Onyankopɔn yɛ otumfoɔ,+ na ɔrempo onipa;Ɔyɛ otumfoɔ a ɔwɔ komam ntease; 6 Ɔrenkora ɔdebɔneyɛfo biara nkwa so,+Na mmɔborɔni de, obedi n’asɛm ama no.+ 7 Ɔrenyi n’ani mfi ɔtreneeni biara so;+Ahene a wɔte agua so mpo+​—Ɔde wɔn bɛtena so daa, na ɔbɛma wɔn so. 8 Wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn gu wɔn,+Na wɔde amanehunu hama kyere wɔn. 9 Ɛno na ɔbɛka wɔn nneyɛe akyerɛ wɔn,Ɛne wɔn bɔne, efisɛ wɔyɛ ahomaso. 10 Obebue wɔn asõ ama afotu,+Na ɔbɛka sɛ wɔnsan mfi adebɔne ho.+ 11 Sɛ wotie na wɔsom a,Wobewie wɔn nna wɔ yiyedi mu,Ne wɔn mfe, anigye mu.+ 12 Na sɛ wɔantie de a, wobetwam akɔ,+ bɛmma ano;+Na nimdeɛ a wonni mu na wobewu. 13 Komam awaefo na wɔbɛboaboa abufuw ano.+Ɔkyekyere wɔn mpo a, wɔrenteɛm nhwehwɛ mmoa. 14 Wɔn mmeranteberem na wɔn kra bewu,+Na wɔn nkwa bɛyera aka asɔrefie mmarima nguaman ho.+ 15 Obegye mmɔborɔni n’amanehunu mu,Na obebue wɔn aso wɔ nhyɛso mu. 16 Obegye wo afi ahohia anom!+Nea ɛhɔ trɛw+ na wubenya, na ɛnyɛ nea ɛhɔ kyere,Na wo pon so awerɛkyekye bɛyɛ sradeduan nko ara.+ 17 Wubehu nnebɔneyɛfo atemmu bebree;+Atemmu ne atɛntrenee besuso wɔn mu. 18 Hwɛ yiye na abufuw+ antwetwe wo na woammɔ wo nsam animtiaabu mu,Na mma mpatade+ kɛse nnnaadaa wo. 19 Wo sufrɛ no, wobetie anaa?+ Dabi, ahohia mu,W’ahoɔden nyinaa mpo renkosi hwee.+ 20 Mma wo ho mmpere wo anadwo ho,Bere a nnipa san kɔ faako a wofi no. 21 Hwɛ yiye na woannan ankɔ bɔne ho,+Eyi na woapaw, na ɛnyɛ amanehunu.+ 22 Hwɛ! Onyankopɔn na ɔde ne tumi a ɛkorɔn yɛ adwuma;Ɔkyerɛkyerɛfo bɛn na ɔte sɛ ɔno? 23 Hena na obetumi abu no atɛn n’akwan ho,+Na hena na obetumi aka sɛ, ‘Woayɛ adebɔne’?+ 24 Kae na kamfo ne nnwuma+A nnipa ato ho dwom no.+ 25 Adesamma nyinaa ahwɛ haa;Onipa desani fi akyirikyiri hwɛ.+ 26 Hwɛ! Onyankopɔn korɔn sen sɛnea yebetumi ate ase;+Ne mfe dodow mu nni hwehwɛbea.+ 27 Ɔboaboa nsukoko ano;+Ɛtɔ sɛ osu ne obosu, 28 Na ɛsosɔ fi omununkum mu;+Ɛtɔ gu adesamma so bebree. 29 Hena paa na obetumi ate omununkum ntrɛwmu ase,Ne ntamadan mmobom no?+ 30 Hwɛ! Watrɛw ne hann mu wɔ so,+Na ɛpo bun nso, wakata so. 31 Ɛno na ɔde di ma nkurɔfo;+Ɔma aduan bu so.+ 32 Wakata anyinam so wɔ ne nsam,Wahyɛ mmara wɔ so atia ntuafo.+ 33 Ne mmobom+ ka ne ho asɛm,Nyɛmmoa nso ka nea ɔreba no ho asɛm.